Ukhokelo oluchanekileyo kunye neengcebiso ngesondo sangasese.
Indlela echanekileyo yokulala ngesondo.
Ngokukhawuleza okanye kamva, nakweyiphi na ibini ekhokelela ubomi obunempilo ngokwesini, umba wokuzonwabisa unendlela engaqhelekanga ivela, ingakumbi xa iimeko ezincinane okanye ezingaphantsi sele zivivinyelwe. Kutheni ku bukhali? Ngenxa yokuba umntu uthi ngelinye ilanga: "Mthandi, unesilwanyana esinjalo! Masibe nesondo sangasese? ". Kwaye ngokuqhelekileyo kuza ngokukhawuleza, njengokuba umntu uqala ukufumana iimvakalelo ezintsha, kwaye ibhinqa lihamba ngenxa yobandlululo obuye lwaphuhliswa kuluntu.
Iingcamango malunga nokulala ngesondo
Abasetyhini, njengezidalwa zengqondo, bathanda ukuphefumula ngeemeko ezahlukahlukeneyo, kwaye bavela nezizathu zokubangela ukuba ingcamango ayithandi kakhulu. Ngethamsanqa, amanye amava abo akwenzeki ngokupheleleyo. Oomama abathandekayo, masibhubhise iimbali ezihlwayelwe kwizizukulwana - qwa lasela ezinye zezinto ezixhaphakileyo ngokuqhelekileyo ngesini esandulelayo:
Inkolelo ye-1: "Kubuhlungu, u-unesthetic, kwaye, ngokuqhelekileyo, uyinto enyanyekayo." Kukho inxalenye ebalulekileyo yenyaniso kule nkcazo - inkqubo ayiyi kuba yinto emnandi, ukuba ayilungiselelwe kwangaphambili.
Inkolelo yesi-2: "Akunakwenzeka ukuba nandiphake ngesondo sangasese". Kwakhona, konke kuxhomekeke kwinqanaba lokulungiselela kwakho, kungekhona nje emzimbeni, kodwa kunye nokuziphatha - ukuba uzibeka ngokwakho, ukuba le yinkqubo enyanyekayo enganelisayo, kuya kuba njalo.
Inkolelo yesithathu: "Isihlalo sam siya kuphulwa kwaye, ngokuqhelekileyo, kuyingozi kwimpilo". Enyanisweni, ukuba awusebenzisi i-lubricant eyaneleyo kwaye uyomeleze imisipha ye-anus, kukho ubukhulu obuphezulu bokungasebenzi kwemvelo (xa i-sphincter ibonakaliswe, i-rectum ayikwazi ukulawula indle). Nangona kunjalo, ngemithetho elula, oku kunokwenzeka ukuba kuncitshiswe kuhla.
Iingcebiso zesigxina socansi: indlela yokubandakanya ngokufanelekileyo kwisini esasilumkileyo
Enyanisweni, ukuba isilungele kakuhle, isondo sangasese sinokuvelisa ukwaneliseka okungenakwenzeka kubo bobabini abalingani, kuba ukuvulwa komyingcele ngowomnye wemimandla echaphazelekayo kwabasetyhini, kwaye kuba amadoda kubaluleke kakhulu ukuba izihlunu kwi-anus zixhomekeke kakhulu kwi-penis.
Okokuqala, kuyimfuneko ukulungiselela i-anus kwisenzo ngokwayo - unakekele ucoceko lwayo kwaye uyandise, uyenze iminwe yokugcoba kunye nokufakela kwi-anus, ngobumnandi.
Ukulungiswa ngokomzwelo, kunye nokukhethwa kwelungelo elifanelekileyo lokungenela - umzekelo, imilenze ecinezelwe kwisisu kwisithuba kwicala - ibaluleke kakhulu ekufumaneni ukonwaba nokunciphisa intlungu.
Musa ukulibala malunga negrisi eninzi - ungesabi ukuhamba kakhulu kule ngxaki. Kungcono ukhethe i-anti-inflammatory and infinmantant.
Ngokwezesondo zomzimba, ubukho bekhondom bubaluleke kakhulu: okokuqala, yimeko enyanzelekileyo kwinkqubo yococeko, kwaye okwesibini, kukho umngcipheko omncinci wokufumanisa nasiphi na isifo, kuba i-mucosa ye-rectal iyakhathazeka kakhulu kwiintsholongwane.
Ukungena kufanele kube njengongenasiphelo kunye nokucocekileyo njengoko kunokwenzeka - kukulungele ukuzisa ilungu kancane kancane. Ulibale ngevidiyo zoononophelo ezikhuthaza ubulili obunzima obuqhelekileyo - ngokuqhelekileyo, iinkwenkwezi zezononono zilungiselela ixesha elide isenzo esinjalo.
Emva kokugqitywa kwesondo sokulala, kuyadingeka ukuba amaxesha amaninzi afakelwe ukunyanzelisa izihlunu ze-anus - ngokukhawuleza ziya kufika kwiimeko zabo eziqhelekileyo, kwaye zihlambulule kunye ne-cream epholileyo okanye i-gel.
Ukuba ungene kwisantya sokulala ngesondo - ungayidluli: ukugcina ithoni ye-muscle nokugcina i-microflora ye-rectum, akufanele uyenze ngokuphindwe kabili ngenyanga.
Khumbula, ukuba ubomi bakho bobulili buye buba yinto eqhelekileyo "inyanzelekile", ke le yindlela enhle yokuvuselela ubudlelwane kwaye nithokozelane ngokuvakalelwa kwintsholongwane.
Indlela yokwenza i-blowjob?
Kutheni uphupha intombazana yentombi
Isondo emva kokuzalwa komntwana
Uxinzelelo oluchaphazela isini
Ukwabelana ngesondo kunye nomyeni wangaphambili
Ayikho i-orgasm yabesifazane
Emva kokubeleka, unokulala ngesondo
Yintoni ebaluleke kakhulu ukuba amadoda atyunde ukuzithanda okanye uthando
Iindlela eziphambili zokupheka
Ngaba i-diapers iyingozi yinkwenkwe?
Indlebe evela kwi-mackerel
Ibhedi egalela umntwana
Sihlambulula amathumbu weesxibisi
"I-Confectionery" ezinokuvelisa kwi-collective makeup MAC Soft Serve
I-kickboxing kwindlela yabasetyhini
Indlela yokuzikhusela kwimiphumo yesini esingaqhelekanga
Amanyathelo okulungisa abantu abangakwazi ukulala
Iklabishi echitshiweyo kunye namazambane